Xinhua Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများကို မဟုတ်မှန်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံငြင်းဆို
တရုတ်	မြန်မာ	ကောလာဟလ	ဆက်ဆံရေး
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က လမ်းလျှောက်နေသူအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)	Politics
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွန်းရင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေနဲ့ပထမဦးစွာ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပြင်းပြသောဆန္ဒကို ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ ၊ အခြေခံဥပဒေနဲ့ တရားဥပဒေမူဘောင်အတွင်းမှာ မတူခြားနားချက်တွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ နဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုတည်ငြိမ်ရေးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဟွာက ဆိုသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ်စလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေကို မြင်တွေ့လိုခြင်းမရှိကြောင်း ဟွာက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုမိုရရှိအောင်လည်း လုပ်နေပါတယ် ။ တရုတ်စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Feb. 18 (Xinhua) -- A Chinese Foreign Ministry spokesperson on Thursday refuted rumors about China on the situation in Myanmar, saying that Internet rumors are nothing but that, aiming at destroying and provoking China-Myanmar relations and friendship.
Spokesperson Hua Chunying made the remarks atadaily press briefing when answeringaquestion on the situation in Myanmar.
"China isafriendly neighbor of Myanmar. We hope that all parties in Myanmar will put the aspiration and interests of the people first, handle differences through dialogue within the constitutional and legal framework, and safeguard political and social stability," Hua said.
"As for the impact on Chinese citizens in Myanmar, we are also getting more information. Chinese enterprises and citizens have contributed to Myanmar's national development and China-Myanmar friendly cooperation. We hope that relevant parties in Myanmar will take concrete measures to ensure their safety," she said.
Next Article တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပျံသန်းသွားလာသည့် လေယာဉ်မှာ ပုံမှန်ကုန်တင်လေယာဉ် ခရီးစဉ်များဖြစ်ကြောင်း CECCM ရှင်းလင်း